Ezempilo nokudla okunempilo - Xiamen Gelken Gelatin Co., Ltd.
1. Ikhwalithi yezinwele ezithuthuzelayo, i-collagen ilungele izinwele ukuthambisa ikhwalithi yezinwele, ingxenye eyinhloko yezinwele amaprotheni, uma ukuntuleka kwamaprotheni, ukondleka kwezinwele kunganele, kulula ukoma kanye ne-bifurcate, amaprotheni anele angagcina ukondleka kwezinwele, vumela izinwele ithambile futhi iyacwebezela;
2.Ukunakekelwa kwesikhumba, i-collagen ilungele isikhumba ukwazi ukunakekelwa kahle kwesikhumba, ubuhle, ngoba i-collagen inomsebenzi wesikhumba esinomsoco, ingagcina kahle ukuqina kwesikhumba, igcine ukuthambisa nokuqina kwayo kukhanya, ilungisa isikhumba esonakele , uqinise isikhumba, umbimbi, ulondoloze ukuthambisa;
3. Izinzuzo ze-collagen esifubeni ukukwazi ukukhuluphala nokuphakamisa isifuba. Ukwakheka kwezicubu zesifuba ikakhulukazi izicubu ezinamafutha nezixhumanisayo, i-collagen eyingxenye eyinhloko yezicubu ezixhuma, futhi i-collagen eyanele ingasisekela ngempumelelo isifuba futhi ibonise ukuma kokuphakamisa isifuba;
4. Ukuvimbela izifo, i-collagen ingagcina umsebenzi we-viscera, ivikele izifo ezithile, futhi izitho nezitho zomzimba zithinteka yi-collagen. Ukuntuleka kwe-collagen kuzothinta kakhulu impilo yezitho, kubangele nezifo ezithile. Uma iphrotheni ye-collagen igcwaliswa ngokuphelele, ingangezela izitho ze-visceral, isize ukondleka nokunyakaza kwezitho ze-visceral, futhi ivikele ngempumelelo esinye sezifo ezithile;
5. Ukuvikela i-osteoporosis, i-collagen ilungele ithambo ukuvimbela i-osteoporosis. Ama-70% no-80% wezinto eziphilayo emathanjeni yi-collagen. Ngakho-ke, lapho kwenziwa amathambo, kufanele kwenziwe imicu eyanele ye-collagen ukwakha uhlaka lwamathambo. Ngakho-ke, abanye abantu babiza i-collagen protein njengethambo elisethanjeni. Ukulahleka kwe-collagen noma ukungabi khona kwe-collagen kuzodala isifo samathambo sesigaba B;
6. I-Collagen inomsebenzi wokubumba imisipha. I-Collagen ingasiza ekwakheni imisipha. Ingangezela i-collagen nsuku zonke kancane, ikhuthaze uketshezi lwe-hormone yokukhula nokukhula kwemisipha, futhi i-supplement collagen ingagcina amandla emisipha;
7. I-Collagen ingagcina impilo yemithambo yegazi, i-collagen ibamba iqhaza elibalulekile ekugcineni impilo yemithambo yegazi. I-collagen eningi ingagcina ukuqina kwemithambo yegazi, ngaleyo ndlela kuvimbele ukuvela kwezimpawu ezingezinhle njengokuqhekeka kwemithambo yegazi kanye ne-embolism.